World News Archives - Page 197 of 198 - Yangon Media Group
တရုတ်နိုင်ငံ ချုံကင်းပြည်နယ် အကြီးအကဲအား အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် ကွန်မြူနစ်ပါတီမှထုတ်ပယ်
ပေကျင်း၊ စက်တင်ဘာ ၃ဝ ၊ တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်း ချုံကင်းပြည်နယ်တွင် ထိပ်တန်း ပြည်နယ်အရာရှိချုပ် ဆန်းဇန်းကိုင်အား အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် ကွန် မြူနစ်ပါတီနှင့်မြို့တော်အုပ်ချုပ် ရေးအပိုင်းတို့မှ ထုတ်ပယ်လိုက် ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၃ဝ ရက် သတင်းများအရသိရှိရသည်။ ၄င်းသည်...
ထရန့်၏ အာရှငါးနိုင်ငံခရီးစဉ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ မပါဝင်ဟုဆို
ဝါရှင်တန်၊ စက်တင်ဘာ ၃ဝ ၊ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်၏ အာရှခရီးစဉ်တွင် ထိုင်း နိုင်ငံမပါဝင်ဘဲ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ဗီယက်နမ်နှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့သို့ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိ သွားရောက်...
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့်ရရှိရေး လူထုဆန္ဒပြပွဲများပြုလုပ်
ဒဗ္ဗလင်၊ စက်တင်ဘာ-၃ဝ ၊ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည်ဟု ကြေညာထားသော ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုအတွက် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲတွင် အငြင်းပွားနေသောကြောင့် လူထောင် ပေါင်းများစွာတို့သည် စက်တင် ဘာ ၃ဝ ရက်က စုရုံးဆန္ဒဖော်ထုတ် ခဲ့ကြသည်။ ''ဒါဟာအင်အားစုစည်းပြသ...
ဟနွိုင်း၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ ကြီးမားသောလိမ်လည်မှု ကြောင့် ဗီယက်နမ်ဘဏ်အမှုဆောင် ဟောင်းအား စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်က သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်သည်။ ¤င်းနှင့်အတူ အမှုစွဲခံရသူများမှာ တစ်သက်တစ်ကျွန်းကျခံကြရသည်။ ဤအမှုတွင် အလွန်ကြီးမားသော အုပ်စုများပါဝင်ခဲ့ရာ ဘဏ်စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းရှင်...
ဝါရှင်တန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်သည် မုန်တိုင်းဒဏ်ဆိုးများခံရသော ပွာတိုရီကိုနိုင်ငံသို့ ရေ ကြောင်းမှပစ္စည်းများတင်ပို့ခြင်းအား ပိတ်ပင်ထားရာမှ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်က ခွင့်ပြုပေးလိုက်သည်ဟု စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက် သတင်းများအရသိရှိရသည်။ နိုင်ငံသို့အဆင့်လေးဟာရီကိန်း မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခံရပြီးနောက် ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်...
အိုင်အက်စ်အဖွဲ့၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဆီးရီးယား အစိုးရတပ်သား ၅၈ ဦးကျဆုံး
ဘေရွတ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ အိုင်အက်စ်အဖွဲ့၏တိုက် ခိုက်မှုကြောင့် ဆီးရီးယားအစိုးရ တပ်သား ၅၈ ဦးထက်မနည်းကျဆုံး ခဲ့ရကြောင်း စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ တစ်ခုက စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက် တွင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ ထိုသို့သေဆုံးသူအများစုသည် ဆူကနာမြို့တိုက်ပွဲတွင် စက်တင်ဘာ...
အိန္ဒိယ ကက်ရ်ှမီးယားဒေသ လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူနှစ်ဦး ရာဖတိုဆု ရရှိ
အော့စလို၊ စက်တင်ဘာ ၂၈ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကက်ရ်ှမီးယား ဒေသမှ လူ့အခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ နှစ်ဦးသည် စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်က နော်ဝေနိုင်ငံမှ ရာဖတိုဆုရခဲ့သည်။ ''ကက်ရ်ှမီးယား၏ သံမဏိအမျိုးသမီး'' ဟုခေါ်ကြသော Parveena Ahanger သည်'' ပျောက်ဆုံး...
တိုကျို၊ စက်တင်ဘာ ၂၈ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အဓိကအတိုက်အခံ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ DP က လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၎င်းတို့ ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမပြုဘဲ အတိုက်အခံများပူးပေါင်း၍ တိုကျိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ယူရီကိုကိုအီ ကီ၏ပါတီသစ်ကိုဝန်းရံ၍ အာဏာရပါတီကိုအနိုင်ယူရန်DP ပါတီကဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း စက်တင်ဘာ...
မူးယစ်ဆေးဝါး စစ်ဆင်ရေးတွင် ဥပဒေမဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်း မရှိဟု အမေရိကန်ကို ဖိလစ်ပိုင်ပြော
မနီလာ၊ စက်တင်ဘာ ၂၈ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန် ကြီးအလန်ပီတာကာယက်တာနိုက အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန် ကြီးရက်ဇ်တီလာဆင်အား ဝါရှင်တန်၌တွေ့ဆုံရာတွင် ဖိလစ်ပိုင်၏ မူးယစ်ဆေးဝါးစစ်ဆင်ရေးကိစ္စကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း၊ မနီလာရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန (DFA)က စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်ကြေညာချက်၌ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဝါရှင်တန်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန် ကြီးဌာန၌တွေ့ဆုံရာတွင်...
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံတွင် နျူကလီးယား ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ဒုက္ခသည်နှင့် ရာသီဥတု စိုးမိုးခြယ်လှ??
နယူးယောက် (၇၂)ကြိမ်မြောက် ကုသလမဂ္ဂအထွေ ထွေညီလာခံတွင် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်၌နျူကလီးယားအရေးကိစ္စ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘင်္ဂါလီအရေးကိစ္စတို့မှာ ဆွေးနွေး ငြင်းခုံမှုအပြုဆုံး အရေးကိစ္စများဖြစ်ခဲ့ပြီး နောက် ညီလာခံကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ သို့ရာတွင် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို တိုက်ခိုက်ရန် ခြိမ်းခြောက်မှုအပေါ်...
Page 197 of 198 Prev 1 … 196 197 198 Next
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က အိန္ဒိယနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးအတွင်းဝန် Mr. Vijay Gokhale အား လက်ခံေ
မဟာမုနိဘုရားကြီး၌ နိုင်ငံခြားသားများ ဝင်ကြေးကောက်ခံရေးဌာနတွင် စကားပြန် ဝန်ထမ်းများ ထားရှ?